Puntlandes.com | Author Archives
Home » Entries posted by Saadaq Jabey
Entries posted by Jabey
Kheyre oo ku dhawaaqay in uu yahay Musharax Madaxweyne September 12, 2020
Raiisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa caawa si rasmi ah ugu dhawaaqay in yahay Musharax u taagan qabashada xilka Madaxweynaha Soomaaliya. War uu caawa soo saaray ayuu ku sheegay ka dib muddo uu waday wadatashiyo in uu ugu dambeyntii ku dhawaaqayo Musharaxnimadiisa. Qoraal uu soo saaray ayaa siddaan qornaa: Bismillah, Walaalayaal, […]
12 September, 2020 / Comments Off on Kheyre oo ku dhawaaqay in uu yahay Musharax Madaxweyne September 12, 2020 / Read More
Kenya iyo Ethiopia ma kudagalami donaan magalada Kismayo
21 August, 2019 Comments Off on Kenya iyo Ethiopia ma kudagalami donaan magalada Kismayo
21 August 2019 (Puntlandes) Warar si hoose usoo baxaya baa waxay tibaaxayan in ciidamada Ethiopia ee ku sugan duleedka Magaalada Kismayo saaka loo diiday inay xeradooda kasoo baxaan. Arintaan ayaa waxaa cabsida looga qabaa inay kor u qaado in Kismayo dagaal ka dhaco. Dhanka kale ciidamada Kenya ka jooga magaalada Kismayo ee caasimada kumeel […]
DHEGEYSO-Diiwaangelinta musharixiinta gudoonka barlamaanka oo maanta bilaabanaysa.
3 January, 2017 Comments Off on DHEGEYSO-Diiwaangelinta musharixiinta gudoonka barlamaanka oo maanta bilaabanaysa.
Jan 03 2017 (Puntlandes)-Gudoomiyaha gudiga doorashada gudoonka barlamaanka Soomaaliya Xildhibaan Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa sheegay in maanta ay bilaabanayso diiwaan gelinta Musharaxiinta u tartameysa Guddoomiyaha Baarlamaanka, Guddoomiye Ku Xigeenka Koowaad iyo Guddoomiye Ku Xigeenka Labaad. Xildhibaan Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, ayaa sidoo kale sheegay in ilaa 5 Bisha Janaayo oo Maalinta Khamiista ku beegan in la […]
DHEGEYSO-Nabadoon Xarrago Oo Soodhoweeyey Heshiiskii Dhexmaray Puntland iyo Galmudug.
3 January, 2017 Comments Off on DHEGEYSO-Nabadoon Xarrago Oo Soodhoweeyey Heshiiskii Dhexmaray Puntland iyo Galmudug.
Jan 03 2017 (Puntlandes)-Nabadoonada gobolka Bari ayaa siweyn u soo dhoweeyey dedaalada nabadeed ee lagu soo afmeerayo colaada magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Afhayeenka nabadoonada gobolka Bari Cabdulqaadir Maxamed Ibraahim Xarrago, ayaa soo dhoweeyey heshiiskii Muqdisho ku dhexmaray magaalada Muqdisho, wuxuuna ku booriyey dhinacyada ay qusayso inay ka shaqeeyaan nabadda Galkacyo. DHEGEYSO
Sawirro-Wararkii ugu dambeeyey ee Garoonka Garoowe iyo ganacsatada oo loo baaqay.
2 January, 2017 Comments Off on Sawirro-Wararkii ugu dambeeyey ee Garoonka Garoowe iyo ganacsatada oo loo baaqay.
Jan 02 2017 (Puntlandes)-Gudiga kuhowlan dhismaha garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland ayaa sheegay in dhismaha garoonku uu marayo meel xasaasi ah dhaqaalihiina uu ka go’ay. Gudoomiyaha degmada Garoowe ayaa sheegay in loobaahan yahay in shirkadaha ganacsiga iyo dadka reer Puntland ay ka qaybqaataan dhismaha Garoonka oo kujira marxaladihii ugu dambeeyey ee dhismihiisa. […]
DHEGEYSO-Sheekh Shariif oo sheegay in Damu-jadiid ku fashilmeen hogaanka dalka.
2 January, 2017 Comments Off on DHEGEYSO-Sheekh Shariif oo sheegay in Damu-jadiid ku fashilmeen hogaanka dalka.
Jan 02 2017 (Puntlandes)-Madaxweynihii hore ee dowladdii kumeel gaarka ahayd ee Soomaaliya ahna musharax madaxweyne Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa eedayn kulul u jeediyey madaxda ugu saraysa ee dowladda hadda waqtigeedii dhammaaday. Musharax Sheekh Shariif Sheekh Axmed, wuxuu sheegay in madaxda dowladdu aysan qaban waajibaadkii looga baahnaa iyo balanqaadyadii ay dadka iyo dalka u […]
Musharax Farmaajo oo sheegay in Xasan Sh Ku Fashilmay fulinta balanqaadkiisii.
2 January, 2017 Comments Off on Musharax Farmaajo oo sheegay in Xasan Sh Ku Fashilmay fulinta balanqaadkiisii.
Jan 02 2017 (Puntlandes)-Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ah musharrax u taagan xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa shir jaraa’id oo uu Muqdisho ku qabtay maanta ku sheegay in uu aad u saluugsanyahay hab dhaqanka madaxda dalka isaga oo ku eedeeyay in ay ku fashilmeen in ay kasoo dhalaalaan […]
DHEGEYSO-Agaasima Waaxeedyo Garoowe Tababar Loogu Qabtay.
1 January, 2017 Comments Off on DHEGEYSO-Agaasima Waaxeedyo Garoowe Tababar Loogu Qabtay.
Jan 01 2017 (Puntlandes)-Qaar kamid ah agaasimayaasha waaxyaha dowladda hoose ee degmada Garoowe ayaa waxaa loo qabtay tababar looga hadlayey arrimo la xiriira gudashada waajibaadka ay u hayaan shacabka kunool magaalada caasimadda ah iyo guud ahaan Puntland. DHEGEYSO
Madaxweynaha Dowladda Puntland oo hambalyo udiray shacabka Soomaaliyeed.
1 January, 2017 Comments Off on Madaxweynaha Dowladda Puntland oo hambalyo udiray shacabka Soomaaliyeed.
DHEGEYSO-Xildhibaanada aqalka hoose oo aan mushahar yeelan doonin mudo 3 bilood ah.
1 January, 2017 Comments Off on DHEGEYSO-Xildhibaanada aqalka hoose oo aan mushahar yeelan doonin mudo 3 bilood ah.
Jan 01 2017 (Puntlandes)-Xukuumadda federalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in xildhibaanada aqalka sare ee barlamaanka Soomaaliya aysan wax xuquuq ah yeelan doonin saddexda bilood ee ugu horaysa sanadkaani maadaama lagu shaqayn doono miisaaniyaddii hore oo aysan kujirin. Wasiirka Wasaarada Maaliyadda dowladda Soomaaliya Maxamed Aadan Ibraahim ayaa sheegay in xildhibaanada golaha Aqalka Sare aysan wax […]